I-China Tube Fibre Laser Cutting Machine Umkhiqizi kanye Nomthengisi | UGoo Hong
Umshini wokusika we-Tube fiber laser wenzelwe ngokukhethekile amapayipi, asebenza kalula. Ngekhwalithi enhle yokusika nokusebenza kahle kokusika, i-tube fiber laser cutter isetshenziswa kakhulu kwimishini yezemidlalo, izinhlobo ezahlukahlukene zepayipi, amapayipi amanzi, amapayipi kawoyela nezinye izimboni, futhi ivumelaniswe nezinto ezahlukahlukene ezimise okhethekile njenge: ipayipi eliyindilinga, ipayipi lesikwele, ipayipi elingunxande, ipayipi okusaqanda, njll.
Umshini wokusika we-fiber High laser, okulula ukusebenza.
Ukusebenza kahle okuphezulu, ukucacisa okuphezulu nokuthembeka okuphezulu.
I-chuck yomoya yokuzicabangela ngokuphelele ezenzakalelayo
I-170mm chuck pneumatic othomathikhi ngokuphelele, idrayivu yegiya ngokunemba;
Umsebenzi onamandla wokufaka othomathikhi, izikhathi ezintathu ijubane le-chuck kagesi, elula futhi esebenza kahle;
I-pneumatic super clamping force, i-clamping esindayo yensimbi iyaqina, ukunemba kokuzisika kuhle;
Usizo lwabenza imisenenzi ipayipi ahlabayo uhlelo
Ixhasa ukusika okuphezulu nokunemba okuphezulu kwamashubhu ayizikwele, amashubhu ayindilinga, amise okwejubane lomjaho, i-elliptical namanye amashubhu aluliwe, kanye nensimbi engeli nensimbi yesiteshi.
· Real-time core ukuphambuka isinxephezelo
· High ngokunemba ukugcwaliseka perforation
· Ukusekela ekhoneni ekubumbeni ngamunye isethwe
· Sekela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe njengephoyinti lokupholisa, ukusika kwendandatho ebukhali, ikona lokukhululwa, njll.
Uhlaka Lombhede Olunye
Umbhede unamekwe ekushiseni okuphezulu kuka-800 C ukuqeda ukucindezeleka kwangaphakathi. Umshini wonke uhlanganiswe kakhulu, nokusebenza okuhle kohlelo nempilo ende
Idizayini eyingqayizivele yokwakheka kwezimboni iyinika ukuzinza okuphezulu nokumelana nokudlidliza okuphezulu nekhwalithi yokunciphisa.
Ngaphambili Nangemuva Okuzenzakalelayo Okugxila Emuva kwe-Pneumatic Chuck
Umshini wokusika we-Tube laser ungabona usayizi ongaba khona kanye nokuma kwesici sokucubungula kwesakhiwo se-tube esiyinkimbinkimbi njenge-cutting.chamferinq, i-grooving noma imbobo, ukufaka amagoli nokunye.
Imodeli yomshini I-GHJG-F6020T (500W-1500W)
UMax. isivinini sokuhamba 100m / iminithi
1.I-Laser Tube ephezulu, elula ukusika
2.Indlela Eqondile Yomugqa Wendlela, isivinini esikhulu futhi eqondile, umthamo wokulayisha oqinile nokuqina.
3. Professional Control System, ukusika okusheshayo.
4.The kwegazi amanzi Ukupholisa, isiqinisekiso lokushisa kwamanzi njalo.
5.Professional lezinyosi kanye Strip umsebenzi ithebula, okuyinto ukuhlangabezana nezidingo ehlukahlukene laser udwendwe
I-6.Le software iyahambisana nezinhlelo eziningi ezahlukahlukene zokuklama.
Langaphambilini Plate futhi Tube Laser Cutting Machine
Olandelayo: Okuzenzakalelayo Professional Tube Laser Cutting Machine
umshini wokusika we-laser omuhle kakhulu
umshini omuhle kakhulu we-laser cnc
ama-laser cutters amahle kakhulu
umshini wokusika ipayipi we-laser
izingxenye ze-laser cutter
laser cutting ifektri
laser ipayipi umsiki
Pipe laser cutting umshini
ngokunemba laser umsiki
Umshini wokusika we-Tube-Tube 4-chuck